Igumbi labucala elinegumbi lokuhlambela, i-balcony kunye nokujonga - I-Airbnb
Igumbi labucala elinegumbi lokuhlambela, i-balcony kunye nokujonga
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguLukasz
Ifumaneka eZakopane, iHostel & Apartments uFlorka 2 ibonelela ngegadi, amagumbi angatshaywayo, iWiFi yasimahla, indawo yokugcina iski kunye negumbi lokuphumla ekwabelwana ngalo.Kukwakho nekhitshi ekwabelwanayo ngalo kunye nenkonzo yokupaka ivalente. Onke amagumbi aza newodrophu kunye ne-TV enescreen esicaba.Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala.
Iindawo ezingqongileyo zifanelekile kubathandi be-skiing kunye nokuhamba intaba.
Yindawo kwindawo ezolileyo nenoxolo, inzuzo enkulu kukusondela kweTatra National Park kunye neembono ezintle ezivela kwifestile !!!
IHostel & Apartments uFlorka 2 ifumaneka eZakopane, 2.7 km ukusuka eKasprowy Wierch kunye ne-2.7 km ukusuka eKasprowy Wierch Mountain Ski Lift.Inika igadi, amagumbi angatshaywayo, iWi-Fi yasimahla, indawo yokugcina i-ski kunye nelounge ekwabelwana ngayo. Imalunga ne-3.4 km ukusuka kwi-Wielka Krokiew ski jump.Kukwakho nekhitshi ekwabelwana ngalo kunye nenkonzo yokupaka ivalethi.
Onke amagumbi anewodrophu kunye neTV enescreen esicaba.Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala.
Ipaki yamanzi iku-3.9 km kude, kwaye iPardałówka ski lift iku-4 km kude.I-Krakow-Isikhululo seenqwelomoya saseBalice sikumgama oziikhilomitha ezili-115. Uhambo lwesikhululo seenqwelomoya lunokulungiselelwa ngeendleko ezongezelelweyo.
Le ndawo yaseZakopane iphinde inikwe umlinganiselo ngexabiso layo lemali! Iindwendwe zifumana ngaphezulu ngeli xabiso xa kuthelekiswa nezinye iipropati kwesi sixeko.
Ndiyafumaneka xa ndingena kwaye ngexesha lokuhlala kwam kwindawo ...
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Zakopane